Google News ကို မကြာခင်ပုံစံအသစ်အဆန်းနဲ့ တွေ့ရတော့မှာလား?
6 May 2018 . 11:53 AM
Google ဟာ လက်ရှိသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးနေတဲ့ Google News Features ကို မကြာခင်မှာ ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲတော့မယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု Google News ပြောင်းလဲမှုက လက်ရှိ Google Play Newsstand App နဲ့ YouTube တို့ဆီက Features တွေကို ရယူတော့မယ့် ပုံစံပါပဲ။
အခုလိုမျိုး Google News အပေါ် ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေက လာမယ့်အပတ်မှာ ပြုလုပ်သွားမယ့် Google I/O Event မှာ အသေးစိတ်သိရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Google Publishing Executive တစ်ယောက်ကပြောကြားတာကတော့ Google ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ သတင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Services တွေအများအပြားရှိနေပြီးတော့ အဆိုပါ Services အများအပြားကို တစ်နေရာထဲမှာပဲရှိနေအောင် ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ပြောကြားချက်အရ ဖြစ်နိုင်တာက လက်ရှိအချိန်မှာ Google ရဲ့ News Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google Newsstand ဟာ Google News ထဲကိုပဲပေါင်းစပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ YouTube ရဲ့ Breaking News Section တွေလည်းပါဝင်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ သတင်းတွေကို Loading Time နည်းနည်းနဲ့ အမြန်ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ AMP Platform ကို အသုံးပြုသွားမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Google ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ News Publisher တွေကို တစ်လကို Click ပေါင်း ၁၀ ဘီလီယံ ရှာဖွေပေးနေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုး ပြောင်းလဲမှုတွေက စာဖတ်တွေသူတွေအပြင် Publisher တွေကိုလည်း အခုထက်ပိုပြီး Engagement ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်တာဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Google ဟာ လကျရှိသတငျးတှကေိုဖျောပွပေးနတေဲ့ Google News Features ကို မကွာခငျမှာ ကွီးကွီးမားမားပွောငျးလဲတော့မယျလို့ ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု Google News ပွောငျးလဲမှုက လကျရှိ Google Play Newsstand App နဲ့ YouTube တို့ဆီက Features တှကေို ရယူတော့မယျ့ ပုံစံပါပဲ။
အခုလိုမြိုး Google News အပျေါ ဒီဇိုငျးပွောငျးလဲမှုတှကေ လာမယျ့အပတျမှာ ပွုလုပျသှားမယျ့ Google I/O Event မှာ အသေးစိတျသိရှိရမှာဖွဈပွီးတော့ Google Publishing Executive တဈယောကျကပွောကွားတာကတော့ Google ဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ သတငျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ Services တှအေမြားအပွားရှိနပွေီးတော့ အဆိုပါ Services အမြားအပွားကို တဈနရောထဲမှာပဲရှိနအေောငျ ကွိုးပမျးနတေယျလို့ ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး ပွောကွားခကျြအရ ဖွဈနိုငျတာက လကျရှိအခြိနျမှာ Google ရဲ့ News Application တဈခုဖွဈတဲ့ Google Newsstand ဟာ Google News ထဲကိုပဲပေါငျးစပျသှားမှာဖွဈပွီးတော့ YouTube ရဲ့ Breaking News Section တှလေညျးပါဝငျလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ သတငျးတှကေို Loading Time နညျးနညျးနဲ့ အမွနျဖတျရှုနိုငျဖို့အတှကျကတော့ AMP Platform ကို အသုံးပွုသှားမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
Google ဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ News Publisher တှကေို တဈလကို Click ပေါငျး ၁၀ ဘီလီယံ ရှာဖှပေေးနတောဖွဈပွီးအခုလိုမြိုး ပွောငျးလဲမှုတှကေ စာဖတျတှသေူတှအေပွငျ Publisher တှကေိုလညျး အခုထကျပိုပွီး Engagement ရရှိအောငျ ဆောငျရှကျပေးဖို့ ရညျရှယျတာဖွဈမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။